Alahady 27/12/2015 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Rehefa izany dia nanao araka izay nolazain’I Elie I Samoela, tamin’izay dia efa nambaran’Andriamanitra tamin’I Samoela sahady ny zavatra hiantsony sy hanirahan’Andriamanitra azy. Tahaka izay koa ny avanjely , izay milaza ny fiainan’ny fianakaviana masina.fa maninona moa I Jesoa no tsy hita fat any an-tempoly no nahitana azy nandritra ny fivahinianana masina? Nisy dikany izany.
Raha hiverenantsika ny tantara dia izao : Efa fomba fanao ho an’ny jody ny mandeha mivavaka in-telo isan’taona any Jerosalema, amin’io no mihira ny oe “ Feno hafaliana ny foko raha nilazanao hoe, andeha isika ho any antranon’I Iaveh”.
Raha jerentsika kely ny fahazazan’I Jesoa, dia vao kely izy dia nentin’ny ray aman-dreniny natolotra tany amin’I Simeona, lahy antitra iray nipetraka nanompo an’Andriamanitra tao an-tempoly.
Amin’izao dia afaka alefa am-piadanana ny mpanomponao araka ny teninao., ef a hitako ny famonjena ho an’I Israely.
Nisy vehivavy antitra koa tao an-tempoly dia I Annaizy nidera an’Andriamanitra, toy izay I Jesoa, mbola kely dia nentina tao an-tempoly, isan’taona dia entina manao fivahinianana masina ao Jerosalema izy.
Araka ny fomba Jody, ny zaza rehefa feno roa ambin’ny folo taona dia atao hoe, zanaky ny lalàna, amin’io fotoana io izy dia homena ny bokin’ny lalàna dia mamaky izany ao amin’ny sinagôga.Tamin’izny ny mpampianatra lalàna rehetra dia nitangiorona nihaino an’I Jesoa sy nametram-panontaniana. Nahagaga ny olona ny fahendren’I Jesoa sy ny fahaizany namely.
Rehefa tapitra ny telo andro fivahinianana masina dia samy nandeha nody ny olona, teo no tsy hita I Jesoa!ahoana reny tebiteby nahazo ny ray amandrenin’I Jesoa? Akory anefa ny fahagagany fa tao an-tempoly no nahitana azy., eo afovaon’ny olon-dehibe izy mampianatra lalàna.F ahoy I Jesoa tamin’ireo ray amandreniny, nhoana no mitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo fa tsy maintsy ato antranon’I raiko aho.? Avy eo dia naira-nidina tamin’izy ireo tany nazareta I Jesoa. Raha mamaky ny baiboly ihany koa isika dia io no teny voalohany nolazain’I Jesoa “ nahoana no mitady ahy ianareo”? fa mbola miverina io tenin’I Jesoa io rehafa nitsangan-ko velona izy, tong any olon sy ny vehivavy masina avy any nazareta, f ahoy I Jesoa, “ Nahoana no aty amin’ny maty no hitadiavanareo ny velona”.
Izay ilay fiainan’ny fianankaviana masina: “Inona no taian hambara amin’izany? Mahita ny asa fanabeazana ankehitriny, ny fiainana ao an-tokatrano, dia miha-sarotra hatrany, maro y olana mianjady amin’izany fiainan-tokatrano izany, be dia be ny asan’ny demony manao izay hanankorotanana ny fiainam-pianankaviana, tsy afenina amin-tsika rehetra ny fiainan’ny fiaraha-monina, mandringa ny fanabeazana, raha tsy hiteny fotsiny isika ny fahasahiranana.
Ny ray aman-dreny tsy mody raha tsy hariva, rehefa tonga ao an-trano dia samy reraky ny fitadiavana, tsy misy intsony ny fifanan-kalozan-kevitra sy ny fifampiresahana eo amin’ny fianankaviana, tsy misy ny fifandraisan’ny mpinankavy, samy maka ho azy ny tsirairay.eo ihany koa indrindra ny fandrosoana(telefaonina, …), samy variana ny mpianankavy, tsy misy mireska fa samy maka ho azy,.Manimba ny fiainam-pianankaviana io satria, ny olona hafa any lavitra no hifaneraserana fa ny ao an-trano tsy hita fa varimbarian’ny lavitra. Nefa jereo ny fiainan’ny fianankaviana Masina tao nazareta : Maninona I Jesoa no tany an-tempoly no hita, satria, izay no nanabeazan’ny Ray ama-dreniny azy , mbola kely izy dia nentina tany an-tempoly nivavaka. Zaro amin’ny lalana tokony alehany ny zaza dieny mbola kely , eny fan a dia mbola ts misy mahalala na inona na inona aza izy, fa arakarak’izay hanazarana azy no ho toetrany rehafa avy eo.
Zaro mivavaka ny zaza, tezao amin’ny vavaka ny ankizy. Fetin’ny Fianankaviana Masina izao, fotoana izao fandinihana. Andeha ho vonjena ny fiainam-pianankaviana dieny mbola tsy potika.